Inqubomgomo Yokubuyisa Imali Yedijithali - Gamepron
Kugcine ukubuyekezwa: Aug 8, 2021
Imikhiqizo yethu okwamanje ilethwa ngokulanda nge-Inthanethi kuphela. Ngemuva kokuthi ukuthenga kwakho kuvunyelwe sizocubungula i-oda lakho. Ama-oda avame ukucubungulwa ngehora elilodwa (1) kepha kungathatha isikhathi esingamahora angamashumi amabili nane (24) ukuqeda. Uma i-oda lakho selicubunguliwe sizokuthumela i-imeyili yokuqinisekisa sisebenzisa ikheli le-imeyili olinikezile kwifomu lethu le-oda.
Le imeyili izosebenza njengeresidi yakho yokuthenga nge-elekthronikhi futhi izoqukatha imininingwane oyidingayo ukufinyelela kulanda lwethu lomkhiqizo.
Ukulanda okuvela kumaseva ethu kuhlolwe kakhulu ukuqinisekisa ukuthi uyakwazi ukufinyelela ngempumelelo kwimikhiqizo yethu. Ngenkathi siguquguquka futhi sikuvumela ukuthi uqedele inani elithile lokulandwayo ngeke sikubekezelele ukuhlukunyezwa kokulanda. Sinelungelo lokuqeda ukufinyelela kwakho kumaseva wethu wokulanda.
Simi ngemuva kwemikhiqizo yethu futhi ukwaneliseka kwakho ngayo kubalulekile kithi. Kodwa-ke, ngenxa yokuthi imikhiqizo yethu iyizimpahla ezidijithali ezithunyelwa ngokulanda nge-inthanethi asinikezi mbuyiselo.
Lapho ukhiye / ukulanda sekudilivwe / kubukiwe uyavuma ukuphakamisa wonke amalungelo okubuyiselwa imali. Akukho ukubuyiselwa kwemali okuzokhishwa uma usulande / ubuke ukhiye njengoba siwubheka njengowusetshenzisiwe.
Ngaphambi kokuthenga ama-hacks, udinga ukuqonda ukuthi ezimweni ezingavamile abasebenzisi bangadinga ukufaka kabusha amawindi abo ukulungisa inkinga yabo ngokukhohlisa, ngoba kwesinye isikhathi umsebenzisi unokufakwa okudala noma okonakele kweWindows, uma ikhasimende liyanqaba ukufaka kabusha, isicelo sokubuyiselwa imali sizoba kwenqatshiwe.
Uma umdlalo uvuselelwe, khumbula ukuthi ama-cheats nawo azodinga ukuvuselelwa. Isicelo sokubuyiselwa imali somkhiqizo ongaxhunyiwe ku-inthanethi / wokuvuselela sizokwenqatshwa.
Kunoma ikuphi unombuzo mayelana nenqubomgomo yokubuyiselwa kwemali, ungayithumela nge-imeyili ku [email protected]